बाहुनहरुको राज्य नै थिएन, पृथ्वीनारायणसँग लडिरहनै परेन | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
पृथ्वीनारायण शाहलाई कुनै पनि हालतमा महान व्यक्ति ठान्न सकिदैन । पृथ्वीनारायण शाहले केवल भूगोगको एकीकरण गरेका थिए । तर उनले विविध जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिहरुलाई नामेट पार्ने काम गरे, एउटै भाषा, एउटै धर्मको नीति लागू गरेर । एकथरि साथीहरु पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिक मान्नैपर्ने, पृथ्वी जयन्ती मनाउनै पर्ने, पृथ्वी जयन्तीका दिन राज्यले सार्वजनिक विदा दिनैपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।
तर हामी आदिवासी जनजातिहरुका लागि भने यो विषय महत्वपूर्ण हुनै सक्दैन । एकातिर नेपाललाई चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी भन्ने व्यवहारमा एकात्मक नीति लागू गर्ने पृथ्वीनारायण शाह कसरी राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हुन सक्छ ? मेरा केही बाहुन मित्रहरुसँग यस विषयमा संवादहरु चलिरहेको छ । उहाँहरुको विचारप्रति म सहमत हुन सक्दिनँ । त्यसकारण सानो लेख मार्फत म आफ्ना कुराहरु प्रष्ट पार्दैछु ।
लडाइँ भोग्ने, लडाइँमा आफ्नो राज्य गुमाएर पीडा सहने र लडाइँमा रमिता हेरेर बस्नेहरु बीचमा धेरै भिन्नता हुन्छ । तत्कालीन समयमा बाहुनहरूलाई जस्तोसुकै अपराध गरे पनि छुट दिइन्थ्यो । त्यसकारण बाहुनहरुलाई पृथ्वीनारायण शाहले हत्या गर्ने कुरै आएन ।
दोस्रो कुरो, बाहुनहरूको कुनै राज्य नै थिएन । त्यसैले उसले उसको राज्य जोगाउन पृथ्वीनारायण शाहसँग लडिरहनै परेन । यसकारण अहिलेका बाहुन मित्रहरुमा गहिरो पिडाबोध हुने कुरै आएन । बरू हाम्रा विरूद्धमा षड्यन्त्र गर्न सल्लाह दिने, क्रुर हत्याका लागि साइत हेरिदिनेजस्ता निक्रिष्ट कार्यका मतियार बाहुनका पुर्खाहरु नै बनेका थिए । त्यसको दृष्टान्त खोटाङ जिल्लाका पोख्रेल बाहुनहरू अहिले पनि छन् । यी यावत कार्यहरूले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले बाहुनहरूलाई पिडा हैन संरक्षण नै दिएर राखेका थिए ।
यिनै मुख्य कारणहरूले गर्दा सबै बाहुनहरू पृथ्वीनारायण शाहको भक्तिगान गाएर उसको गरिब चेतना शक्तिको पूरै बल लगाएर पृथ्वीनारायणको पक्षमा वकालत गरिरहेछन् । आतंकवादी अपराधी पृथ्वीनारायण शाहको पृष्ठपोशक तत्कालीन समयका बाहुनहरू पनि थिए । त्यसैले होसियार ! तिमीहरूको पूर्खाको निकृष्ट कार्यको ढाकछोप गर्न धेरै चलाखी गरिरहन आवश्यक छैन ।
पृथ्वीनारायण शाहले जे गरे त्यो लुटेराको काम गरे वा मानिसलाई अमानवीय यातना दिएर मारे । नाक काटे, कान काटेर आतंक मच्चाए वा अपराध जे गरे इतिहास नै साक्षी छ । तर, त्यही विषयलाई प्रत्येक वर्ष उत्खनन् गरेर करोडौ आदिवासी जनजातिहरुको पूर्खाका सन्ततिहरूका घाउ पटकपटक बल्झाइरहनु उपयुक्त हो त ? निश्चय पनि हैन ।
कम्तिमा विद्वान मित्रहरूले गम्भीर भएर सोचेर मात्रै बोलौ र लेखौ । एक पक्षीय हचुवाको भरमा सतही विश्लेषण गरेको निष्कर्ष निसन्देह सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । मैले यसो भनिरहँदा सबै बाहुन मित्रहरूलाई भनेको हैन । तर, जसले पृथ्वीनारायण शाहसाई एकताको प्रतिकको रूपमा जबरजस्ती पृथ्वी जयन्ती मनाऔ भनी जोड गरिरहेछन् ति मित्रहरूलाई मात्रै भनिरहेको छु ।
तत्कालीन समयमा हाम्रा पुर्खाहरू मारिदै गर्दा, काटिदै गर्दा, खुन बगिरहेको बेला र हाम्रा राज्यहरू लुटिदै गर्दा बाहुनहरूको भूमिका के रहेको थियो भन्ने इतिहासलाई प्रष्ट पार्न मात्रै चाहेको हुँ । र जसले जीवनमा तितो ऐतिहासिक पीडा भोगे, त्यसलाई सबैले बिर्सिदिउ र बिर्सिने अवसर दिउ । ताकि एक पक्ष मानिसहरु चाहिँ आदिवासी जनजातिको पूर्खाको रगतको आहालमा पृथ्वी जयन्ती मनाएर रमाइरहने र अर्को पक्षका मानिसहरु प्रत्येक वर्ष त्यही पीडा सम्झेर दुःखित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस ।
एक पटक पीडितहरूको ठाउँबाट या हाम्रो ठाउँमा बसेर पनि सोच्नुस र बुझ्ने प्रयत्न गर्नुस विद्वान मित्रहरू । मेरो किरात राज्य खोसिदै गर्दा सारा किरातीहरू काटिदै गर्दा सुराकी गर्ने खोटाङका खार्पाली बाहुनहरूको उदाहरण मैले माथि नै पेस गरिसकेको छु । त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस । के उहाँहरूप्रति अहिले पनि सम्झदा मलाई पीडाबोध हुँदैन र ? आक्रोशका पराकाष्ट चुलिदैन र ? चुलिन्छ किनकि यो मानवीय स्वभाव नै हो । सबैलाई स्वभाविक रूपमा हुन्छ । तर, मानवीय चेतनाले त्यसलाई हामीले पनि आफ्नो बसमा राख्छौ । हामीजस्ता पीडितहरूको इतिहासको नमीठा कुराहरू सबैले भूलौ र नयाँ कोणबाट हामी सबै जातजाति एक भएर नयाँ सिर्जनात्मक इतिहासहरू रच्दै अघि बढौ भन्दा तपाईहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष त्यही घटनालाई खोतल्दै खुसी हुँदै रमाउने अनि हामीलाई पनि जबरजस्ती करकापमा रमाउन र खुसी हुन लगाएर आत्मपीडा दिइरहने ? यो तरिका त भएन नि ।
यो त हजारौ सहिदहरूले आत्मआहुती गरेर, उनीहरूको त्याग र बलिदानले प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग हो । तर यहाँ अझै शक्तिको आडमा जबरजस्ती निरंकुश तानाशाही शैलीमा अधिनायकवाद लादेर पीडितहरुले विद्रोह गर्ने वातावरण बनाउने प्रयत्न गरिदैछ ।
अब भन्नुस्, यतिबेला मानिस आक्रोशले खुकुरी उध्याउँछन् कि सधैभरि सहेर बस्छन् ? यस्तो वातावरण जसले सिर्जना गर्छ ऊ दोषी कि ? हिजोका नराम्रा घटनाहरू सबैले भुलौ, सबै मिलेर बस्ने वातावरण बनाऔ भन्नेहरु दोषी ? कथित विद्वान मित्रहरुले सोच्नुपर्छ ।
(भगवान चाम्लिङ रार्इ संघीय समाजवादी फाेरम नेपालका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुन्)
Posted by admin on Feb42017. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
2 Comments for “बाहुनहरुको राज्य नै थिएन, पृथ्वीनारायणसँग लडिरहनै परेन”
Sher Bahadur Ale
February 5, 2017 - 11:54 am
Very good your appreceited
February 8, 2017 - 5:39 am
Thanks for actual actual history admin jyu.